काठमाडौं – जुम्लामा कर्णाली र दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेका छन्, पढाइ किन भएन ?
– सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष भयो, बन्ने कहिले हो ?
– कुनै पनि नागरिकले प्रश्न सोध्दा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ, जवाफकै प्रतीक्षामा डा. केसी १७ दिनदेखि अनशन बस्दा सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ
डा. केसीका बिगतका अनशन खेर गएका छैनन्, जसले स्वास्थ्य शिक्षामा यी सुधार भए
– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो । ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । आयोगबाट केही काम सुरु भएको छ । अब एकीकृत परीक्षा, शुल्क, सिट निर्धारणका काम आयोगबाटै हुनेछन् ।
– मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढ्यो । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा एमबिबिएसमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।
– एमबिबिएस÷एमडीमा शुल्क निर्धारण भएको छ । कतिपय कलेजले विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्, तर सरकारले चाहेमा तिनलाई कारबाही गर्ने एउटा आधार बनेको छ । अभिभावक शोषण गरेर बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकहरू अदालतमा मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन् ।
– सिटिइभिटीबाट स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम जथाभावी बाँड्न बन्द भयो । प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बन्द गरिए ।
– विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरू पनि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षा पास गरेका व्यक्तिलाई मात्र विदेश पढ्न जान अनुमति दिने व्यवस्था भयो । धन मात्र नभएर क्षमता पनि भएका व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था भयो ।
– नेपालमा पढ्ने विदेशी विद्यार्थीले पनि यहाँको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम बनेको छ, जसले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय भएको छ । जथाभावी भर्ना गर्नेलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।
– मेडिकल कलेजका क्षमताअनुसार सिट निर्धारण भएको छ । जथाभावी मेडिकल कलेजलाई दिइने सम्बन्धन रोकिएको छ ।
– विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीको अनुगमन बढेको छ । पहिले कागजमा देखिने प्राध्यापकहरू भौतिक रूपमै मेडिकल कलेजमा उपस्थिति हुने क्रम बढेको छ ।
उहाँ अहिलेसम्म १९ पटक अनशन बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँलाई जस–जसले साथ दिनुभएको छ, उहाँहरू कसैले पनि सर तपाईं अनशन बस्नुप¥यो भन्नुभएको छैन । उहाँका सबै शुभचिन्तकले उहाँलाई गर्ने अनुरोध के हो भने अनशन नबस्नोस्, ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस्, तपाईं बाँचेर बोल्दा त यत्रो बेथिति छ भने भोलि तपाईंको ज्यानै गयो भयो भने भोलि बोलिदिने पनि को होला ? तर, उहाँ भन्नुहुन्छ– हामीले एउटा ज्यानको माया गर्ने कि तीन करोड नेपाली जनताको ज्यानको ? सबैको ज्यान अमूल्य छ भनेर उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । अर्को कुरा, देशको एउटा वरिष्ठ डाक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरौँ भनेर १९ पटक अनशन बस्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले घरिघरि गएर अनशन तोड्नुस् भन्न मिल्दैन । उहाँको यो तपस्या हो, उहाँको यो समर्पण हो, त्यसलाई अपमान गर्न हाम्रो ब्रह्मले दिँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन् ।